Indlu yelizwe enomtsalane enedama lokuqubha (iindlu ezi-6 zizonke, bona kwakhona IEC102), ebekwe kwiinduli ezintle ze-Emilian kunye neekhilomitha ezi-3 kuphela ukusuka kwiindawo zokuhlambela ezidumileyo zaseSalsomaggiore. Indawo yokuhlala ibekwe kumgangatho ophantsi, inomnyango owahlukileyo oneveranda entle yokutyela ngaphandle kunye nemibono emangalisayo yasemaphandleni. Iyafumaneka kuzo zonke iindwendwe: iindawo eziluhlaza eziphangaleleyo zokutshiswa lilanga kunye nedama lokuqubha. Indawo ifanelekile ukujonga indawo kunye neemveliso zayo eziqhelekileyo ezifana netshizi yeparmesan, i-charcuteries kunye newayini. Imbali yabathandi bezobugcisa iya kufumana malunga neekhilomitha ezi-3 kude "umzila weenqaba ze-Duchy" kunye nenqaba yamandulo yaseScipione (ukususela kwinkulungwane ye-11), apho iifrescoes kunye neempahla ezivela kwi-17 yenkulungwane zigcinwe kakuhle. Ukusuka endlwini iindlela ezininzi zokukhwela intaba zikhokelela kwiVia Francigena, kwaye ngaphantsi kweekhilomitha ezi-2 kude yipaki yendalo iStorione, ilungele ukubukela iintaka. Ngesicelo: I-1 ibhedi eyongezelelweyo okanye ibhedi yomntwana, ifakwe kwixabiso. Iikhilomitha ezingama-32 kuphela ukusuka kwidolophu yaseParma, isixeko somculo kunye nethiyetha kunye nendawo yokuzalwa kunye nemyuziyam Arturo Toscanini, "Casa del Suono" kwaye okokugqibela kodwa kungancinci iTeatro Regio, eyakhiwa ngesicelo se-Empress. Maria Luigia yaza yavulwa ngo-1829 kwaye iseyeyona ndawo idumileyo ehlabathini. Bologna 110 km; Firenze 220 Km; Genova 195 km. Kwindawo yokutyela yangaphakathi iindwendwe zingonwabela izitya zalapha ekhaya (ngamathuba athile zivulwa ngoMgqibelo nangeCawa). Indawo yokutyela isetyenziselwa imitshato. Iimitha ezingama-200 zokugqibela zendlela yokufikelela egangathiweyo zinemingxuma emincinane.
Imigama: indawo yokuhlala ekufutshane 5 m / ivenkile 3 km / indawo yokutyela 10 m / idolophu ekufutshane (Salsomaggiore) 3 km
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Salsomaggiore T. PR